वोर्ड अध्यक्षमा ३ जनाको नाम सिफारिस, को-को परे ? « Ramailo छ
वोर्ड अध्यक्षमा ३ जनाको नाम सिफारिस, को-को परे ?
समय : 4:54 pm
चलचित्र विकास वोर्ड अध्यक्ष पदका लागि सञ्चार मन्त्रालयले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । जसमा निर्देशक नरेश कुमार केसी, एभ्रेष्ट एकेडेमीको सञ्चालक विशाल श्रेष्ठ र कार्यकारी निर्माता मनिष पण्डितको नाम छ ।
शुक्रबार बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले विकास वोर्ड अध्यक्षको नाम टुंगो लगाउने भनिएपनि बैठक स्थगित भएपछि अब सोमबार बस्ने बैठकले मात्रै विकास वोर्ड अध्यक्षको नाम टुंगो लगाउनेछ । विकास वोर्ड अध्यक्षको दौडमा निकिता पौडेल, उज्जवल घिमिरे, सुचित्रा श्रेष्ठ, आयुष रिजाल लगायत थिए । अध्यक्ष राजकुमार राईको कार्यकाल जेठमा सकिएपछि विगत ६ महिनादेखि वोर्ड अध्यक्ष विहिन छ । अध्यक्ष नहुँदा महत्वपूर्ण निर्णय र हुँदै आएको राष्ट्रिय पुरस्कार पनिरोकिएको छ ।